घनश्यामले खोजे अर्को ओली नजन्मिने ग्यारेन्टी
बुटवल, १५ माघ । नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता घनश्याम भुसालले अहिले ओली प्रवृत्तिलाई हराए पनि अर्को ओली जन्मिँदैन भन्ने ग्यारेन्टी के हो ? भन्दै नेताहरुलाई प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘निरङ्कुशताको प्रेत’का रुपमा चित्रित गर्दै उनले अर्को ओली नजन्मने प्रतिवद्धता पार्टीले जनतासँग स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘सडकमा हराइन्छ, अदालतमा हराइन्छ । तर फेरि अर्को ओली नजन्मिने ग्यारेन्टी के हो ? जनतालाई भन्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
बिहीबार बुटवलमा आयोजित विरोधसभामा बोल्दै उनले भने, ‘निरङ्कुशताको प्रेत’का रुपमा खडा भएका ओलीको पतन हुनेमा अब कुनै शंका छैन ।’ ओलीको पतन हुनेमा अब कुनै शंका नभएको उनले बताए ।
नेता भुसालले आफैले चुनेको पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री ओली, राणा र राजाहरुकै शैलीमा ओली अगाडि आएको बताए । उनले भने, ‘ओलीको बाटो संविधानको हत्या गर्ने, अस्थिरता, अशान्ति र बर्बादी हो ।’ त्यसविरुद्ध आफूहरु खडा भएको भएको उनले बताए ।
अहिले करोडौ जनताको सपना एकातिर र निरंकुश तानाशाह अर्कातिर भएका बेला त्यस्ता निरंकुश तानाशाहदलाई उनको सनकसहित टिपेर हुत्ताउनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले चुनेको प्रधानमन्त्रीले समस्या खडा गर्दैछन् । राणा र राजाले होइन । ओलीको बाटो संविधानको हत्या, अस्थीर, जनता र मुलुकको सत्यानाश हो’, उनलाई कदापी सफल हुँन दिँदैनाैं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना कर्तुत लुकाउन झूटको खेती गरिरहेको भन्दै ‘प्रधानमन्त्री ओली राणा र राजाको प्रेतको रुपमा आएको बताए ।’ अहिले आमनागरिकले आफ्नो जीवनको मूल्य खोज्नुपर्ने बेला आएको भन्दै ‘लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई लत्याउन खोज्ने ओलीको अब उल्टो दिनगन्ती सुरु भएको समेत उल्लेख गरे । ओलीलाई सबैतिरबाट हराएरै छाड्ने नेता भुसालको दावी छ ।
कोमल वलीद्वारा रघुजी पन्तविरुद्ध मुद्दा दायर
एसईई जेठ १३ मा, १२ को परीक्षा जेठ २६ देखि
एमाले-माओवादीको औपचारिक विभाजन आज, आयोगले संसदलाई जानकारी गराउने
धुम्बाराहीबाट हट्यो नेकपाको बोर्ड, राखियो नेकपा एमालेको बोर्ड
शोकाकुल बन्यो निमाइल बस्ती, एकै घरका पाँच जनाले कर्णालीमा हामफालेर गरे आत्महत्या
पेरिसडाँडामा नेकपा हैसियतमा अन्तिम बैठक, पुनः एकता प्रयास गर्ने
काठमाडौं मेयर कप क्रिकेट : आर्मीकाे पहिलाे जित,काठमाडौं मेयर ११ पाँच विकेटले पराजित
मन्त्री आले भन्छन्- निजी वन उद्यमीले अब अन्य व्यवसायीले जस्तै सरकारबाट सहुलियत ऋण पाउनेछन्
अब नेकपा एमालेको ९ ‌‌‍औं महाधिवेशनले चुनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल
वामदेव गौतमले भन्न थाले ‍ – सबैभन्दा पहिले पूर्वएमालेकाे एकता गर्छु, अनि मात्रै अरु
प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठक जारी, बैठककै बीचमा बाहिरिए यी सदस्यहरु
सोमबार थप ८९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, १ जनाको मृत्यु
सुरु भयो प्रचण्ड–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक